चीनबाट लस्कर लाग्दै नेपाल भित्रिए सय वटा विद्युतीय कार ! - Thulo khabar
चीनबाट लस्कर लाग्दै नेपाल भित्रिए सय वटा विद्युतीय कार !
काठमाडौँ : यातायातको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीले उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ विद्युतीय कार आयात गर्न थालेका छन्।
आवाज एवं धुँवारहित चिनियाँ विद्युतीय सेतो रङका कार तीन दिनको अन्तराल मा १०० नेपाल भित्रिएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका ती सवारी साधन नियमानुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा
गरी क्रमिक रूपले काठमाडौँ लैजाने कार्य अगाडि बढि रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत राम प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
आयात भएका कारमा पाँच जनासम्मको यात्रा सहज हुने बताइएको छ। कारबाट भन्सार शुल्कबापत रु १० करोड ९८ लाखभन्दा बढी रकम राजस्व असुली भएको छ।
धुँवा तथा आवाजरहित भएका कारण नयाँ आयात भएका चिनियाँ कारले सवारी प्रदूषणमा न्यूनी करण गर्ने र यात्रामा समेत सहज पार्ने जनाइएको छ । रसुवागढी नाकाबाट हालसम्म आयात भएका अन्य सवारी साधनमध्ये पछिल्लो समय
नेपाल भित्रिएका ती कार नयाँ मोडलका देखिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । डिजेल पेट्रोलजस्ता इन्धनबाट चल्ने अन्य सवारी साधनभन्दा चिनियाँ विद्युतीय कार गुडाउन अत्यन्तै सहज हुने बताइएको छ ।